Maxaan u Soo Saarnay Turjumaad Kitaabka?
Magaca Ilaahay oo ku qoran Sabuurradii 69:31 ee qaybta “Symmachus” qarnigii saddexaad ama afraad ee Ciise dabadii (C.D.)
Muddo dheer Markhaatiyaasha Yehowah waxay isticmaaleen, daabaceen oona qaybiyeen turjumaado badan ee Kitaabka Quduuska ah. Waqti kaddib waxaan garannay in loo baahan yahay turjumaad cusub oo dadka ku caawinaysa inay si saxan ‘runta u gartaan.’ Tan waa Ilaahay doonistiisa uu dadka oo dhan u rabo. (1 Timoteyos 2:3, 4) Sidaas daraaddeed sanadkii 1950 waxaan bilaabnay inaan qaybqayb u soo saarno Biblekayaga Turjumaadda Adduunka Cusub oo luqad casriyaysan ku qoran. Biblekan 130 luqadood baa si aammin ah oo saxan lagu turjumay. *
Waxaa loo baahnaa Kitaab ay fahmiddiisu fududdahay. Kelmedo la fahmin oo lana isticmaalin baa ku jiro turjumaado badan waayo marka waqti laga soo wareego luqaduhu way is beddelaan. Waxaana la helay qoraallo qadiimi ah oo kuwa kale ka sii saxan oo la qoray waqti u dhow Kutubtii asalka ahaa. Tani waxay sababtay in si fiican loo fahmo Cibraaniga, Aramaygga iyo Giriigga oo ahaa luqadihii Kitaabka lagu qoray.
Waxaa loo baahnaa turjumaad erayga Ilaahay si aammin ah inoogu gudbiso. Kuwa Kitaabka turjumo waa inay si aammin ah u turjumaan qoraalkii asalka ahaa. Ma ahan inay beddelaan qoraallada ruuxa Ilaah ku ahaaday. Haddaba turjumaadaha Kitaabka badnaantooda magaca Ilaahay Yehowah ku ma jiro.
Waxaa loo baahnaa Kitaab xushmeeya Kii uu ka yimid. (2 Samuuʼeel 23:2) Qoraallada ugu qadiimisan ee Kitaabka magaca Yehowah 7,000 oo jeer in ka badan ayuu ku qornaa sida sawirka hoos ku yaalla lagu muujiyay. Turjumaadda Adduunka Cusub magaca Yehowah dib baa meelaha uu ku qornaa oo dhan loogu celiyay. (Bilowgii 22:14) Sanado badan baa lagu dadaalay baadhista Kitaabkan oo akhriskiisa sahlanna waa laga helaa waayo si cad buu aragtida Ilaahay inoogu gudbiyaa. Turjumaadda Adduunka Cusub luqaddaada haddii ad ku haysatid ama haddii kaleba waxaan kugu talinaynaa inaad maalin walba akhrisatid Erayga Yehowah.—Yashuuca 1:8; Sabuurradii 1:2, 3.
Maxaan u goʼaamsanay in loo baahan yahay turjumaad cusub ee Kitaabka?
Haddii aan rabno inaan baranno doonista Ilaahay maxaa inoo fiican inaan sameyno maalin walba?
^ qayb. 3 Turjumaadda Adduunka Cusub weli af Soomaali lagu ma soo saarin laakiin luqado badan oo kale baad ku akhrisan kartaa.
Wadaag Wadaag Maxaan u Soo Saarnay Turjumaad Kitaabka?
Maxay Markhaatiyaasha Yehowah u Soo Saareen Turjumaad Kitaabka?